Tag: na | Martech Zone
Ozugbo m hụrụ na ejiri ya na aha otu isiokwu na ahịa, enwere m obere ọrụ ọhụụ. Ihe omuma ihe omuma a n'okpuru Devesh Design na aru oru di nkpa itinye nkpa nkpa ndi ahia kwesiri iji email diri ulo oru ha. Enweghị m obi abụọ ọ bụla gbasara ike nke email ma ọ bụ ikike dị ka teknụzụ ahịa ịkwanye iji kpalie ndị debanyere aha iji mee ihe. Ọ na-arụ ọrụ… na onye ọ bụla kwesịrị ịdị
Ekwenyeghi m mgbe Okpomọkụ mepụtara ihe ngosi a, mana ọ dị mma na m ga-ekerịta ya. Ihe mere o ji dị mma bụ n'ihi na ọ bụ anya na eziokwu na etu esi azụ ahịa ndị ọkachamara na-eji usoro mgbasa ozi na ndị na-elekọta mmadụ na ndị na-abụghị ndị ahịa. Ekwetaghị m na ndị ndu zuru oke na ụlọ ọrụ a na-ese onyinyo ojiji nke mgbasa ozi mmekọrịta. Ọtụtụ n'ime ha na-echetara m maka ndị nwanyị na-agba ọsọ ngwa ngwa n'ebe ahụ. Anyị kwesịrị
Saturday, April 13, 2013 Wenezdee, Machị 8, 2017 Douglas Karr
Jay Baer bụ otu n'ime ndị na-ekwu okwu mgbasa ozi na-elekọta mmadụ na ndị edemede m na-ege ntị. N’oge na-adịbeghị anya, ọ dere ọmarịcha akwụkwọ ozi na ozi ederede nke na-enye nnukwu ntụnyere nke ndị na - eme ihe ike na ndị na - akwado akara. Mgbasa mgbasa ozi bụ ihe dị mkpa n'ọtụtụ mgbasa ozi mmekọrịta yana mmemme mmekọrịta ọhaneze ọgbara ọhụrụ. Ma ha anaghị enwekarị nsogbu ịkwọ ụgbọala karịrị akarị mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Edere m akwụkwọ banyere ihe kpatara nke a, akpọrọ Why Why Influencer Online